Android အတွက် Gyro Compass App ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Android အတွက် Gyro Compass App ကို: စစ်မှန်သောမြောက်အမေရိက Direction အဖွဲ့
Android အတွက် Gyro Compass App ကို: စစ်မှန်သောမြောက်အမေရိက Direction အဖွဲ့ APK ကို
Android အတွက် Gyro Compass App ကို သင့်မိုဘိုင်း gyroscope အာရုံခံ App နဲ့မြောက်ကိုရီးယားဦးတည်ချက်ရှာပါ။ ဒါဟာသင်မြို့ကြီးများ & နိုင်ငံများတွင်ခရီးသွားလာကြသောအခါမြောက်ဘက် & တောင်ဘက်တစ်ဦးဦးတည်ချက်ကိုရှာဖွေဟာ android တွေအတွက်အဆင့်မြင့်တိကျစွာ & လောက်မရှိတဲ့လှပသောဒစ်ဂျစ်တယ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လမ်းဆုံးရှုံး & ပျြောရှငျတဲ့ခရီးသွားရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး! Android အတွက်၎င်း၏ 3d သံလိုက်အိမ်မြှောင် - Android အတွက်အခမဲ့ငါ၏အစမတ်သံလိုက်အိမ်မြှောင် app ကို detect & စစ်မှန်တဲ့မြောက်ဘက်ဦးတည်ချက်မှသွားလာရန်တိကျသောသံလိုက်အိမ်မြှောင်ဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာသံလိုက်အိမ်မြှောင်, တောင်တက်များအတွက်ခရီးသွား, ခရီးသွားဧည့်, ဧည့်သည်များ, တောင်တက်တစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်ကိုသင်လမ်းညွန်ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီရန် altimeter, မြင့်, အညွှန်း, တိမ်းညွတ်, သြဒီနိတ်, လက်ရှိတည်နေရာလျင်မြန်စွာ & တိကျစွာဖြစ်ပါတယ်ကားမောင်း, boating & သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့သံလိုက်စက်ကွင်းတိုင်းကိရိယာခေါငျးစဉျအောကျ အသုံးပြု. ပျံသန်း bussola, البوصلة, သံလိုက်အိမ်မြှောင်ထလေ၏။
စစ်မှန်သောမြောက်အမေရိက Direction အဖွဲ့မှ Android အတွက် Compass သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
> ဒီ Gyro သံလိုက်အိမ်မြှောင် app ကိုသုံးစွဲဖို့, သင့်ဖုန်းသည်သင်၏ android ဖုန်းကိုတစ် COMPASS အာရုံခံကိရိယာကို OR gyro ဆင်ဆာ OR သံလိုက်စက်ကွင်းတိုင်းကိရိယာအာရုံခံကိရိယာကိုရှိရမည်
> မှားယွင်းသောရလဒ်များကိုရှောင်ရှားရန်ကွာသတ္တုတ္ထု, စက်ပစ္စည်း & ဘယ်မှာမြင့်သောသံလိုက်စက်ကွင်းထဲကနေ device ကိုထားပါ။
> မြေပေါ်မှာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအပြိုင် Keep & သင်သတ်မှတ်ချင်သောအနီရောင်မြှားဆီသို့လှည့်။
> Android ကိုသံလိုက်အိမ်မြှောင် on-screen လမ်းညွန် & ဒီဂရီပြပေးလိမ့်မယ်။
> သင်ကတိကျမှန်ကန်ရလဒ်များကိုကိုရှာဖွေသံလိုက်အိမ်မြှောင်အခမဲ့ app ကိုကြိုးစားနိုင်ပါ။
> ကားမောင်းမှုအတွက် Navigator: လမ်းအချက်များ, သံလိုက်မြောက်ဘက်အားဖြင့်သင်တို့၏ဦးတည်ရာသို့သွားရန်။
> ဤလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုရန်, သင့်ရဲ့ device ဟာ android ဖုန်းသံလိုက်အိမ်မြှောင်အာရုံခံရှိရမည်။
> အဆိုပါသံလိုက်အိမ်မြှောင်တိကျမှန်ကန်မှုကိုသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်အာရုံခံကိရိယာပေါ်မှာလုံးဝမူတည်! မှားလမျးညှနျခ၌ဤသံလိုက်အိမ်မြှောင်အချက်များပါလျှင်, သင်သည်သင်၏အာရုံခံကိရိယာကိုအချိန်အဆညှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
> သင်တစ်ဦးသံလိုက်မြောက်ဘက်ဦးတည်ချက်အမှားကြုံတွေ့ရပါက, ကိန်းဂဏန်း 8, နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသုံးကြိမ်အတွင်း device ကိုဝှေ့ယမ်းအားဖြင့်သင့်ဖုန်းကိုအချိန်အဆညှိ။
> သံလိုက်အဖုံးများနှင့်အတူ Komp / Gyro Compass app ကိုမသုံးပါနဲ့။
Android အတွက်သံလိုက်အိမ်မြှောင်: တစ်စမတ်သံလိုက်အိမ်မြှောင် App ကိုအခမဲ့ Android အတွက်သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များအတွက်မရှိမဖြစ် App ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကလိုအပ်တဲ့အခါသင်လိုအပ်ကြောင်းနေရာလေးကိုလာလိမ့်မယ်သောအခါအသင်သိဘယ်တော့မှရှိရာက, သင့်အိတ်ကပ်ထဲမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်သံလိုက်အိမ်မြှောင် app ကို, တောင်, မြောက်, အရှေ့နဲ့အနောက်၏ဦးတည်ချက်ပြသဘက် window တွင်ဒီဂရီပြသထားတယ်, အဆင့်မြင့်သံလိုက်အိမ်မြှောင်အညွှန်းများအတွက် bezel လှည့်လိုက်ပါတယ်။
Android အတွက်သံလိုက်အိမ်မြှောင် app ရဲ့အသုံးဝင် features တွေ:
ဦးတည်ချက် Finder များအတွက်•စစ်မှန်သောခေါငျးစဉျအောကျနှင့်သံလိုက်ခေါငျးစဉျအောကျ
•သံလိုက်နဲ့စစ်မှန်တဲ့မြောက်ဘက်ရရှိနိုင်ပါသည်, app ကိုအလိုအလျှောက်အပြောင်းအလဲ၏စောင့်ရှောက်မှုကြာ
• Slope အဆင့်ကိုမီတာ
• Kompass အမှန်တကယ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်နဲ့တူအသုံးပြုနိုင်သည်သုံးစွဲဖို့ရိုးရှင်း
• azimuth သံလိုက်အိမ်မြှောင်ကစားနည်းအာကာသအပ်၏ Professional ကစပျစ်သီးကိုသံလိုက်အိမ်မြှောင်ဒီဇိုင်း
• odometer နှင့်အတူဤ kompas နှင့်မြန်နှုန်းနှင့်သင်၏လမ်းကြောင်းကိုစစ်မည်
•မြန်နှုန်းနှင့်အတူတိကျစွာသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုထိ & လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်၌သင်တို့၏အကွာအဝေးကိုဖုံးလွှမ်း
• Qibla Compass: ဒါဟာ qibla ဦးတည်ချက်ကိုရှာဖွေ qibla Finder အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
တစ်ဦးကသံလိုက်အိမ်မြှောင်ထိုကဲ့သို့သောခရီးသွား, ပျော်ပွဲစား, စခန်းတောင်တက်သို့မဟုတ်ယောက်မှာအဖြစ်သင့်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအများစုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ထိုအရပ်၌များစွာသောသံလိုက်အိမ်မြှောင် apps များစျေးကွက်အပေါ်ပေမယ်သူတို့ထဲကအများစုဟာသာ America မှာတိကျစွာအလုပ်လုပ်ပေမယ့်သြစတြေးလျနှင့်အာရှအတွက်တိကျမှုနည်းပါး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထဝီသံလိုက်အိမ်မြှောင်ပေါင်း app ကိုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်တိကျစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
N ကိုမြောက်ဘက်ဦးတည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်, ငါ၏သံလိုက်အိမ်မြှောင်မြှားအမြဲကရှာတှေ့နိုငျ
S ကတောင်ဦးတည်ချက်ဖြစ်ပါသည်, kompas ကပြောထားသည်
NE မြောက်အမေရိကအဘိဓါန် East ဦးတည်ချက်ဖြစ်ပါသည်
စံ Compass Mode ကို:
ဤသည်က GPS မြေပုံ app ပေါ်တွင်သံလိုက်အိမ်မြှောင်အရှိဆုံးတိကျသောနှင့်အသုံးဝင်သော App ဖြစ်ပါတယ်, s360, s6, Qmobile, Vivo, Sony, Oppo, Motorola, Nokia စသည်တို့ကို Samsung Galaxy s7, s8 ၏သံလိုက်အာရုံခံသုံးပြီးစစ်မှန်တဲ့မြောက်ဘက်ပြသကြောင်းကိုသင်၏ပုံမှန်သံလိုက်အိမ်မြှောင်9ဖြစ်ပါသည် ကားတစ်စီးနှင့်ဆိုင်ကယ်အဘို့အ GPS အမြန်နှုန်းပြကိရိယာတွေနဲ့ built-in သံလိုက်အာရုံခံအပေါ်အခြေခံပြီး Google Maps ပေါ်မှာလမ်းညွန်ပြအညွှန်းနှင့်တိမ်းညွတ်ရည်ရွယ်ချက်သည်။
- version ကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်နှင့် fixed ။
- အချို့သောကိရိယာများပေါ်တွင်အချို့ပျက်ကျ Fixed ။
Android အတွက် Gyro Compass App ကို: စစ်မှန်သောမြောက်အမေရိက Direction အဖွဲ့
19.24 ကို MB
BazApps - အခမဲ့ Android App များ & တိုက်ရိုက်နောက်ခံများ
ဒစ်ဂျစ်တယ် Compass ...